Yakagovaniswa Gwaro Kugadziridza Kunouya kuGoodNotes 5 | IPhone nhau
Iwo mafomu ayo anotiperekedza zuva nezuva mhedzisiro yebasa refu nevakagadziri. Dzimwe nguva maturusi makuru nemaapplication ane mutengo mudiki wekutenga. Mutengo uyu unovimbisa kuti iwe unogona kukoshesa basa revagadziri uye zvakare kuvimbisa mabasa matsva mune ramangwana. Imwe yeaya maficha ndeye Mashoko Akanaka 5, imwe yeakanakisa mafomu ekugadzira, kugadzirisa uye kugadzirisa zvinyorwa zvedu. Uye zvakare, iri-yemidziyo-mizhinji app inoenderanawo neMac. vhezheni itsva inosanganisira mukana wekugovana mafaera echinyorwa chakabatanidzwa nevamwe vedu. Mushure mekusvetuka tinokuudza iwe dzese nhaurwa dzekuvandudza.
GoodNotes 5 inogamuchira kugona kugadzirisa pamwechete
Shanduko kumagwaro akagovaniswa anowiraniswa kuburikidza neICloud uye anotora masekondi gumi nemashanu kusvika makumi matatu kuti aoneke pane mamwe madivayiri. Parizvino, chero munhu ane chinongedzo anogona kuvhura nekugadzirisa gwaro rakagovaniswa paGoodNotes. Tinokurudzira kugovana magwaro chete nevanhu vaunovimba.
Pakave nezvakawanda shanduro dzeGoodNotes kusvika pano. Kubva pane ino yakafanana magwaro akagovaniswa atove chaiwo. Nenzira iyi, unogona kutumira chinongedzo chinobvumidza kuwana gwaro reGoodNotes kuitira kuti ubatane kuronga kana kuona gwaro richiri kuvandudzwa nevose vanokwanisa kuwana.
Kana mushandisi akaita shanduko mukati megwaro rakagovaniswa, chiratidzo chebhuruu chichaonekwa kune wese munhu ane gwaro muraibhurari yavo. Nenzira iyi munhu wese achaziva kupi uye rini shanduko yakaitwa kune iro gwaro rakagovaniswa. Uye zvakare, mushandisi wega wega anokwanisa kuwana zvese zvinyorwa zvakagovaniswa naye nekuda kwechikamu chakatsaurirwa kwachiri.
Kuti ushandise iri basa, ingotinya paShare icon kubva mukati mefaira uye shandisa iyo basa Kubatana. Kana tangopinda mukati, tichaita kuti basa racho riite Link Kugovana. Tichawana URL yatinogona kutumira kune chero munhu ane maGoodNotes 5 akaiswa mune yazvino vhezheni. Kubvisa kupinda, isu tichafanirwa kuita inochinja maitiro.
GoodNotes 57,99 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Yakagovaniswa Gwaro Kugadziridza Kunouya kuGoodNotes 5